Ngwarira mimhanzi yekutamba vashandisi inokanganisa Apple Music kurudziro | IPhone nhau
Maitiro ekudzivirira mimhanzi inoridzwa nePambaPod kubva mukukanganisa Apple Music kukurudzira
Ehe, isu tine inoshamisa HomePod kumba uye munhu wese ari kushandisa yedu Apple Music account kuridza mimhanzi yavo pairi, zvinonakidza, asi pane dambudziko uye ndezvekuti izvi zvigadzirwa zvinokanganisa zvakananga kurudziro dzaunoita muaccount yedu uye izvi zvinogona dambudziko kana isu tisingade kuti utiratidze mazano e mimhanzi isiriyo yedu chaiyo maitiro.
Ndosaka tiine sarudzo inowanikwa mumasevhisi ayo kana tikamisa kana kuimisa zvichatibatsira neizvi. Iyi ndiyo sarudzo inonzi «Shandisa kutamba nhoroondo»Uye isu tinogona kuzvibata patinoda kuti tirege kurudziro dzisiri dzatinoda.
Maitiro ekumisikidza kana kuremadza nhoroondo yekutamba yePambaPod yedu
Zvinogona kutaridzika kunge zvakaoma kuita asi zviri nyore chaizvo kugadzirisa uye kuwana sarudzo. Matanho atinofanira kutevedzera Kumisa kana kumisa basa iri zvinotevera:
Isu tinovhura iyo Kumba kunyorera pane iyo iPhone kana iPad
Isu tinoramba tichinyora pa icon yeedu HomePod mune runyorwa rwezvishongedzo
Dzvanya pane Zvirongwa zvinowoneka muzasi kurudyi
Mumamiriro aya tinongoda kumisa kana kuita sarudzo: "Shandisa nhoroondo yekutamba" uye ndizvozvo.
Nenzira iyi isu tinodzivirira iyo HomePod kubva mukuchengetedza nhoroondo yemumhanzi iyo yavakaridza kukurudzira mimhanzi uye nekudaro chero mhando yerwiyo iyo isiriyo yedu maitiro. Iyi sarudzo inogona kumisikidzwa kana kudzimwa chero nguva uye inoitwa nekumisikidza muPambaPods.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzivirira mimhanzi inoridzwa nePambaPod kubva mukukanganisa Apple Music kukurudzira
Kwete, Apple haisi kuvhura chero chinongedzo pari zvino
Siri anodzima mwenje wekicheni. "Zvakanaka, izvozvi. Ruregerero, pane zvisina kumira zvakanaka. Edza zvakare."